Ihe niile gbasara agwaetiti Canary - Ihe ị ga - eme na ihe ị ga - ahụ na agwaetiti | Njem zuru oke
Agwaetiti Canary bu agwaetiti nke di n’Oké Osimiri Atlantik bu kwa obodo guzosiri ike nke Spain. N'otu aka, otu n'ime isi nleta bụ ileta Tenerife. Ma Teide National Park na Santa Cruz bụcha ebe abụọ dị mkpa. Na-echefughi Pyramid nke Güimar ma ọ bụ La Orotava yana El Médano, nke bụ ebe ndị njem ọzọ na-egosi.
Na Gran Canaria ị nwere ike ịga Maspalomas, nke bụ otu nnukwu ebe njem nleta, yana ụyọkọ ya. Echiche na ebe ngosi ihe mgbe ochie ga-amasị gị yana ogige ntụrụndụ. Ọ bụrụ na anyị kwụsị na Lanzarote, mgbe ahụ anyị ga-enwe ọ itsụ ya Natural Park nke ugwu mgbawa, yana Timanfaya Park. Isuo La Graciosa ga - eme ka ị nwee oke osimiri puru iche. Echefula Jameos del Agua, nke bụ usoro ọgba dị ezigbo mkpa.
Na Fuerteventura ị nwere obodo Corralejo yana Isla de Lobos ma ọ bụ osimiri Cofete, ebe La Palma ị nwere ike ịgafe Santa Cruz, osimiri Cancajos ma ọ bụ San Antonio Volcano. Na La Gomera ị gaghị echefu Vallehermoso, nke bụ obodo kachasị ukwuu, ma ọ bụ Torre del Conde na ụsọ osimiri ya.
Rụcha na El Hierro na isi obodo ya bụ Valverde na Mirador de la Peña ma ọ bụ obodo nke La Frontera, nke ọzọ bụ na ị nwekwara ike ịnụ ụtọ na mpaghara a nke Canary Islands.
Ihe ị ga-ahụ na Canary Islands
Kedu ihe ị ga-ahụ na Canary Islands? Ọ bụ ajụjụ a na-ajụkarị n'etiti nde ndị njem nleta na-eleta kwa afọ ...
por Susana godoy eme Ọnwa 10 .
Anyị nwere ike ịkọwa Cueva de los Verdes dị ka ọnụ ụzọ nke etiti ụwa. N'ihi na ọ bụ ihe ...
Ogige Ntụrụndụ Timanfaya, nke dị na Canary Island nke Lanzarote, pụrụ iche na mba anyị maka ịbụ onye a ma ama ...
Mgbe anyị kwuru banyere Roque Nublo, anyị ga-ekwukwa Gran Canaria n'ihi na ọ bụ otu n'ime ebe izizi na ...
por Njem zuru oke eme 2 afọ .
Oge ọkọchị na-agwụsị ma mgbụsị akwụkwọ amalite, oge nke afọ nke mbelata awa ...
N'ime ebe n'etiti Lanzarote na Fuerteventura, otu agwaetiti bilitere na-ekwe nkwa ọzịza nke anyị bịara ịchọ ...
Agwaetiti Canary na-egosiputa ihe nkpuchi nke ihe nlere na ebe nlegharị anya nke choro na Tenerife ebe oria kacha mma ebe ...
Caldera de Taburiente dị na Canary Islands, n’agwaetiti La Palma. Ọ bụ ogige echekwara ...